Minisitry ny fahasalamana Mizara arotava sisa ...
Mpamily mivoaka an` i Toamasina Mila manana pasipaoro manokana
“Mila mifanaraka amin` ireo “transitaire” ireo mpivarotra fiara vaovao (concessionnaire) sy mpanafatra fiara avy any ivelany”, hoy Tianarivelo Razafimahefa, filohan` ny CCO COVID-19.
Antananarivo Nisy voafonja voan’ny Coronavirus
Any amin` ireo firenena mandroso dia fanomezana fahafahana vonjimaika ny voafonja ny fepetra (procédure carcérale)no raisina mba hifehezana ny aretina Covid-19 any amin` ireo fonja.
Andrana tsindrona Artemisia “Handefa manam-pahaizana any Afrika i Madagasikara”
Ny tambavy vokarintsika dia tsy isika eto ihany no nahita azy io. Efa tamin’ny nisy ilay SRASS-COV1 dia efa tamin’ny alalan’ny Artemisia no nampiasan’ny firenena sinoa azy io.
Ady amin’ny Coronavirus Toamasina Efa am-perinasa ireo miaramila 250 avy aty Antananarivo
Nitsodrano ny bataillon na iraka manokana izay nanainga ny sabotsy hariva teo hihazo an'i Toamasina ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard, sy ny Lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika, ny Jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude.
Taorian’ny nanontanian’ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana, azy hoe mba nankaiza no niverina nahitana ny minisitry ny fahasalamana niseho fahitalavitra nanentana mikasika ny ady amin’ity valan’aretina COVID 19 ity.
Ny minisitry ny serasera no tena tsikaritry ny mpanara-baovao ho mateti-piavy ary mbola niterahan’ny tsikera voalaza teo ihany koa. Efa andro maromaro indray moa izao no niverina nampametra-panontaniana ny maro ny tena andraikitry ny minisitry ny fahasalamana, Ahmad Ahmad, manoloana izao toe-draharaha izao. Raha ny hita omaly aloha dia nizara arotava tamin’ireo mpiara-belona aminy sisa no hita ho niandraiketan’ity tompon'andraikitra ity. Mbola hita ho taratry ny tsy fahatomombanan’ny fitsinjarana andraikitra hatrany.Tsy nahafa-po ny maro moa ilay valiteny mahazatra hoe miasa mangiana, sa ve mbola hamafisina hatrany fa ny seho ivelany no lehibe indrindra?